कमरेड के यो तिमी नै हौ?
मेरा बा–आमाले काममा जाँदा तिमीसँगै मलाइ छोड्ने गर्थे, त्यसबेला मैले तिम्रो काखमा मैले थुप्रै पटक शु शु गरेछु। यति सरल मानिस तिमी, राज्यबाट ठगिएका सबै जाति भाष धर्मका अनि गरीब मानिसका भरोषा थियौ। तर तिमी एकाएक सांप्रदायिक विद्धेस प्रोत्साहित गर्न पो उभियौ। हुँदा हुँदा आज तिमी नेपाली जनता मारिँदा विदेशीको चिठी बोकेर देशको संसदमा उ निर्दोश छ भन्न थाल्यौ रे। लोकतन्त्र जसकालागि तिम्रो आह्वानमा धेरै मानिस शहिद हुन हौसिए। कति त बलिदान भए। त्यही लोकतन्त्रका बैरीहरुसँग मिलेर आज तिमी पनि राष्ट्रघातमा लागेको देख्दा म सा¥है चकित भएको छु , कमरेड के यो तिमी नै हौ।
कमरेड नं ४, तिमी अत्यन्त इमान्दार भएर कमरेड एक र दुइसँग लागेका। आज तिमीसँग लागेका थुप्रै मानिसहरु कति बेपत्ता छन्, कतिका मृत्यु अगाडिका अन्तिम बोलीका स्मृतिमात्र छन्। के आज यही दिन देख्नका लागि तिमी लडेका थियौ ? तिमीले आफ्ना बैँशका मिठा सपना जनताको मुक्तिका लागि भनी त्यागेको यही कुशासनका लागि हो। तिमीसँगै लडेको कमरेड आज मन्त्री भएको छ। तस्करीको आँफुलाई सानो भुरो बताउँछ। तिम्रो नेतृत्व गरेको कमरेड आज विदेशीका आततायी दमनका विरुद्ध सत्ताच्युत हुने डरमा चुँ बोल्दैन।
हामीलाई थाह छ हाम्रो सपना न हिजो खराब थियो ,न आज नचाँहिदो छ। हामी सम्मानका साथ हरेक नागरिक मिलेर बस्न पाउने, राज्यले सामाजिक सुरक्षासहितको न्यायको प्रत्याभुति देओस्, हाम्रो सार्वभौमिकता अझ मजबुत बनोस्, संसारभरका न्यायका चाहानमा हाम्रो ऐक्यबद्धता रहोस्। गाँस बास कपास, स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा र रोजगारको हाम्रो सपना आजपनि पवित्र छ। यो सपनामा साथ दिने के तिमी नै हौ त कमरेड?
प्रकाशित मिति: आइतबार, फाल्गुण २९, २०७३ १२:५५:३०